Southern Nations, Nationalities & Peoples Regional Stat
Address: SNNP - RHB HAWASSA,
Issue Date FY: 2021 ( Subtotal = $5,260,110 ) (Continued on the next page)
2021 2021 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 05 4 CDC 5/27/2021 850514612 $0
2021 2021 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 01 5 CDC 9/16/2021 850514612 $0
2021 2021 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 00 5 CDC 8/16/2021 850514612 $280,000
2021 2021 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 04 4 CDC 3/16/2021 850514612 $42,450
2021 2021 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 00 5 CDC 8/16/2021 850514612 $245,000
2021 2021 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 00 5 CDC 8/16/2021 850514612 $84,693
2021 2021 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 06 4 CDC 8/13/2021 850514612 $0
2021 2021 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 00 5 CDC 8/16/2021 850514612 $1,068,817
2021 2021 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 05 4 CDC 5/27/2021 850514612 $916,335
2021 2021 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 04 4 CDC 3/16/2021 850514612 $0
2021 2021 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 04 4 CDC 3/16/2021 850514612 $120,000
2021 2021 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 02 4 CDC 12/17/2020 850514612 $1,791,749
2021 2021 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 00 5 CDC 8/16/2021 850514612 $649,507
2021 2021 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 03 4 CDC 3/1/2021 850514612 $0
2021 2021 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 04 4 CDC 3/16/2021 850514612 $105,000
2021 2020 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 03 4 CDC 3/1/2021 850514612 $0
2021 2020 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 06 4 CDC 8/13/2021 850514612 $0
2021 2020 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 01 5 CDC 9/16/2021 850514612 $0
2021 2020 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 05 4 CDC 5/27/2021 850514612 $0
2021 2020 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 04 4 CDC 3/16/2021 850514612 $0
2021 2020 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 01 4 CDC 11/23/2020 850514612 $0
2021 2020 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 02 4 CDC 12/17/2020 850514612 $0
2021 2020 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 00 5 CDC 8/16/2021 850514612 $0
2021 2019 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 06 4 CDC 8/13/2021 850514612 $0
2021 2019 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 01 5 CDC 9/16/2021 850514612 $0
2021 2019 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 05 4 CDC 5/27/2021 850514612 $0
2021 2019 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 04 4 CDC 3/16/2021 850514612 $0
2021 2019 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 01 4 CDC 11/23/2020 850514612 $0
2021 2019 NU2GGH002054 Support for the Provision of Sustainable Quality HIV Services and Attaining Impact in the Southern Nations,Nationalities and Peoples Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 02 4 CDC 12/17/2020 850514612 $0
Grand Total All Awards = $33,617,401
Sum of Action Amount is $33,617,401;
Grand Total = $33,617,401